BurmeseBible: ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ၊ Money, Materialism and Gospel
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ၊ Money, Materialism and Gospel
၁။ လိုင်စင်/ပါမစ်များရယူခြင်း (သို့မဟုတ်) လိုင်စင်/ပါမစ်ရသူများထံမှ လက်ဆောင်ယူခြင်း
၂။ လက်ဆောင်မပေးသူကို နည်းမျိုးစုံနဲ့တောင်းရမ်းခြင်း၊ တောင်းမရရင်လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးပြခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိတဲ့ စနစ်ဆီကိုပြောင်းလဲနေပါပြီ၊ အစိုးရအာဏာပိုင်တစ်ဦးချင်း တိတ်တိတ်ကလေး လက်ဆောင်၊လာဘ်ငွေ ယူခြင်းအဆင့်က၊ တစ်စုလုံးစုပေါင်းပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး လယ်ယာ၊ အိမ်ခြံမြေများ ဝေခြမ်းယူကြကြပါတယ်။ ဂရမ်ထုတ်ယူ၊ အဆင့်ဆင့်ရောင်းပြီး ငွေကြေးချမ်းသာလာခြင်း။ လိုင်စင်/ပါမစ်ရထားသူများက သယံဇာတရောင်းခြင်း၊ သွင်း/ထုတ်ကုန်များကို အခွန်ပေးစရာမလိုပဲ (အခွန်ပေးမည့်ဥပဒေလဲမရှိ)၊ ပါမစ်ရထားသူများ၊ ပါမစ်လိုချင်သူများထံ တောင်းရမ်းခြင်း..စတဲ့အဖြစ်ပျက်များဟာ မကြာခင်နည်းပါး၊ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီကို ပြောင်းလဲတဲ့ အစဦးကာလမှာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ ဝိသမလောဘသမားများရဲ့ မြန်မာပြည်အာဏာပိုင်များ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရာမှာ လူတိုင်းမျောပါနေရတဲ့ ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နည်းမျိုးစုံနဲ့၊ လက်ဆောင်တောင်းရမ်းတဲ့ မြန်မာပြည်အစိုးရ၊ ဌာနဆိုင်ရာများရဲ့ အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရ၊ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးများအတွက် အထူးဆုတောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။
အခုရေးမဲ့အကြောင်းကတော့ အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ မွန်မြတ်သန့်ရှင်းတယ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘာသာရေးလောကအကြောင်းပါ။ အခြားဘာသာတွေတော့ မရေးလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဓမ္မဆရာ၊သင်းထောက်၊ ဂေါပဂလူကြီးများအကြောင်းကို အနည်းငယ်ရေးချင်ပါတယ်။
ဘာသာရေးလောကအတွက်၊ အဲဒီအချက်၂ချက်ကိုပဲ ဆွေးနွေးကြပါမယ်..။
၁။ အလှုငွေ၊ ပါစင်နယ်ပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) တန်ဘိုးကြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်း ဥပမာ အိမ်ခြံမြေ၊ ကား လက်ဆောင်ရခြင်း
တစ်ခါက နိုင်ငံခြားအသင်းတော်တစ်ခုက၊ မြန်မာပြည်မစ်ရှင်အတွက် မတည်ငွေနဲ့စည်ကမ်းစည်းမျဉ်းတွေပေးပါတယ်။ ဘုရားအမှုဆောင်အဖြစ် ပါဝင်သူအားလုံးကို စားဝတ်နေရေး၊ တာဝန်ယူပါတယ်။ ခရီးစရိတ်လည်းတာဝန်ယူပါတယ်။ ဝိညာဉ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တော့.. အမှုဆောင်များမှာ၊ စာရေးစာချီ၊ ကားဒရိုင်ဘာကအစ မန်နေဂျာအထိ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အဲဒီခေတ်က လူတစ်ယောက် လစာငွေဒေါ်လာ၅၀လောက် (ကျပ်ငွေ၃၀၀၀) ဆိုရင်လောက်ငှစားသောက်နိုင်ပါတယ်။ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်က အထူးသဖြင့် ကျမ်းစာကျောင်းပြီး၊ ဓမ္မဆရာများအတွက် အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပါစင်နယ်အလှုငွေအားလုံးကို အဖွဲ့အစည်းထံ စာရင်းနဲ့ပြန်အပ်ရမယ်။ ဘယ်သူပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းနဲ့ထားရမယ်..ဆိုတဲ့ ဥပဒေက တော်တော်ကြပ်တည်းပါတယ်။ မိဘဆွေမျိုးမဟုတ်သူများဆီက ပေးတဲ့ငွေကိုတောင် စာရင်းနဲ့အပ်ရမဲ့ ဥပဒေပါ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ နိုင်ငံခြားကျမ်းစာသင်တန်းပို့ဖို့ အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ အမှုဆောင်၊ လူငယ်များထဲကပဲ ရွေးချယ်ပြီးပို့ဖို့ နောက်ဆုံးတော့ ခေါင်းဆောင်၊ ဓမ္မဆရာက သူ့သမီးကိုပဲ ပို့လိုက်တယ်။ အသင်းလဲပျက်သလိုဖြစ်သွားပြီး၊ လက်အောက်ကအမှုဆောင်တွေလည်း အလုပ်ကထွက်သွားကြတယ်။
အသင်းအဖွဲ့ရဲ့ မူဝါဒကတော့ အမှုဆောင်နဲ့ဓမ္မဆရာအားလုံး ပါစင်နယ်ပေးငွေ (သို့မဟုတ်) လက်ဆောင်ပစ္စည်းအားလုံးကို အသင်းတော်ထံ ကြေငြာအပ်နှံရမယ်။ ဒီငွေ၊ လက်ဆောင်များဟာ အသင်းတော်အဖွဲ့ကပိုင်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း တန်ဖိုးနဲရင် ရသူကို ပြန်ပေးတယ်။ တန်ဖိုးကြီးရင်တော့ အသင်းတော်ပိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ စင်ကာပူ၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန် အစိုးရအာဏာပိုင်များဟာ သူတို့ရတဲ့ လက်ဆောင်အားလုံးကို ပါစင်နယ်ကြေငြာအပ်နှံရပါတယ်)။
၂။ လက်ဆောင် (သို့မဟုတ်) အလှုငွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့တောင်းရမ်းခြင်း၊ တောင်းမရရင်သူတို့မိသားစုနဲ့ကိုဝိညဉ်ရေးအင်အားဖြင့်ဖိနှိပ်ခြင်း
တောင်းရမ်းခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်စားပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းမှာ အလှုငွေခဏခဏ ကောက်ခံတတ်ပါတယ်။ အသင်းတော်ပလ္လင်ပေါ်မှာလည်း အလှုငွေထည့်ဖို့၊ အဆောက်အဦးဆောက်ဖို့ အရမ်းလျို့ဆော်ပြောကြားပါတယ်။ လက်ဆောင်ကြိုက်တတ်တဲ့ လူ့သဘောကြောင့် ၊ လက်ဆောင်ကောင်းကောင်းပေးမှ ဆုတောင်းပေး၊ အိမ်လိုက်ပေးတဲ့ အလေ့အထများ တော်တော်ရှင်သန်နေပါတယ်။ ပလ္လင်ပေါ်တက်တာနဲ့ သင်းအုပ်ကလည်း သူ့မစ်ရှင် Own Mission ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ဆုတောင်းပေးကြပါလို့ ထည့်ပြောပါတယ်။ တချို့တည့်ထိုးပြောတဲ့ သင်းအုပ်၊ သင်းထောက်များကတော့ အသင်းသားတစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်ထည့်ပါ..ပေါ်တင်တောင်းလိုက်ပါတယ်။
သင်းအုပ်က အသင်းတော်၊ မစ်ရှင်အတွက် ပိုက်ဆံတောင်းရင်၊ သင်းအုပ်ကို အရမ်းအားကိုးသူ၊ မိသားစုများ ..မပေးပဲမနေရဲပါဘူး။ ဒီလို ဝိညဉ်ခွန်အားနဲ့တောင်းတာမျိုးကို ဝိညဉ်ရေးနဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းလို့ ပြောရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေရပါသလဲဆိုတော့ ဓမ္မဆရာများ အသင်းတော်ကပေးတဲ့ လစာငွေနဲ့မလောက်ငှလို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်၊ ရန်ကုန်မြို့မှာ တက္ကစီနဲ့သွား၊ အပြင်ဆိုင်မှာစားသောက်ကြရင်တော့ အလွန်စရိတ်ကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသင်းတော်၊ဓမ္မဆရာများရဲ့ စရိတ်ကလည်း ရေကန်အတင့်၊ ကြာအမြင့် ဆိုသလို စရိတ်ကြီးလာပါတယ်။
ဓမ္မဆရာ၊ အမှုဆောင်လဲ လူပဲဖြစ်တော့ လောဘရှိပါတယ်။ သူတို့လည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့တောင်းရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကျောင်းတက်နေတဲ့ သမီးရဲ့၊ စရိတ်အတွက် ဆုတောင်းပေးပါဦး။ နိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးဆေးစစ်ဖို့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါဦး..စသဖြင့် လိုအပ်ချက်တွေလည်း မြင့်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တောနယ်များက သင်းအုပ်ဆရာများကတော့ တစ်လ ဒေါ်လာ၁၀၀ (ကျပ်တစ်သိန်း) ဆိုရင် လောက်ငှပါတယ်။ စီးပွားကောင်းတဲ့မြို့တွေဆိုရင်တော့ သင်းအုပ်ဆရာလည်း တစ်လ ၃သိန်းလောက် လိုအပ်ပါတယ်။ လိုတာကတော့ သုံးလေလေ လိုလေလေပါပဲ။
ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းခြင်း၊ ဖြေရှင်းချက် (နိဂုံး)
ဦးစွာပထမ သဘောထားကွဲခြင်းရှိမယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲနိုင်ပေမဲ့ ... ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်း၊ဆပ်ကပ်ပြီးမှ ဆွေးနွေးကြတာကောင်းပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့ လမ်းပြမှုအောက်မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်း၊ တောင်းကြလော့၊တောင်းလျှင်ရလိမ့်မည်..အဓိပ္ပါယ်ကို ဝိညာဉ်တော်က ဖွင့်ပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အလှုငွေပဲတောင်းနေခြင်း၊ အသင်းတော်အဆောက်အဦး၊ အသင်းတော်ခေတ်မီပစ္စည်းပရိဘောဂ၊ ဂီတပစ္စည်းများပဲ အလှုပေးဖို့ တောင်းနေခြင်းဟာ Materialism Church လို့ခေါ်ပါတယ်။ အသင်းတော်က ဝိညာဉ်ခွန်အားပေးနေတယ်.. အသင်းသားတွေက အနည်းဆုံး ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးရမယ်.. အတင်းအကြပ်သဘော အလှုငွေကောက်ခံခြင်းဟာ ဓမ္မသစ်နည်းလမ်းနဲ့မကိုက်ညီပါဘူး။ ဓမ္မဟောင်းမှာတော့ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ မပေးပဲမနေရ ..လို့ အတိအလင်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဦးသီး၊ ယာဇ်ပူဇော်ခြင်း..စတဲ့ ပေးကမ်းလှုခြင်းများအကြောင်း ဘုရားသခင်ရဲ့ ဥပဒေသရှိပါတယ်။
ဓမ္မသစ်မှာတော့ အဲဒီလို ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ မပြောတော့ပါဘူး။ သင်ရဲ့ဥစ္စာ၊ ရွှေငွေပစ္စည်း၊ အိမ်ခြံခြေအားလုံး ဘုရားသခင်ပိုင်တယ်..လို့ အတိအလင်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စိတ်စေတနာရှိသရွှေ့ လှုဒါန်းဖို့ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာ ရေးသားထားတော့၊ ဘုရားဥစ္စာထဲက ဘယ်လောက်၊ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ဘုရားကို ပြန်ပေးရမလဲဆိုတာ မေးခွန်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အဖြေကတော့ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်ဝိညာဉ်ရေး ပြည်ဝသလဲ ဆိုတာကို မူတည်ပါတယ်။ ကျမ်းစာမှာ ဘယ်လက်လှုဒါန်းတာကို ညာလက်မသိစေနဲ့ လို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်လှုတာ..ဘုရားနဲ့ကိုယ်ပဲသိပါတယ်။ လူတကာကြားအောင် ကြေညာပြီးလှုဒါန်းတာ ဘုရားမကြိုက်နှစ်သက်ပေမဲ့ လူတွေကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ လူအကြိုက် လှုဒါန်းမှာလား.. ဘုရားအကြိုက်လူဒါန်းမှာလား....။
အသင်းတော်အများစုနဲ့သင်းအုပ်များကတော့ လာရောက်ပါဝင်ဆပ်ကပ်ဖို့ပဲ တောင်းဆိုကြပါတယ်။ အလှုငွေတောင်းတာ နည်းပါတယ်။ ဝိညာဉ်ရေးပေးနိုင်ရင် အသင်းသားများက လှုဒါန်းပါဝင်ဖို့ ဝန်မလေးတော့ပါဘူး။
ဘုရားသခင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လှုဒါန်းခြင်းကတော့ ကျိုးပဲ့ကြေမွသောစိတ်နှလုံးနဲ့ ဘုရားသခင်ကို အပ်နှံဆပ်ကပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေသောဝိညာဉ်များကို လိုချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ရွှေငွေ၊ဥစ္စာ၊ရာထူး၊ ဘုရားကျောင်းအကြီးကြီး တောင်းနေစရာလိုပါသလဲ...?
သေချာတာကာတော အလှုပေးဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) အလှုတောင်းဖို့ အရမ်းဆုတောင်းရပါတယ်။ နှုတ်နဲ့မတောင်းရမ်းခင် ... ဘုရားနဲ့နဘမ်းလုံးပြီး၊ ဘုရားထံဆုတောင်းရပါတယ်။ ဘုရားသခင်က အိမ်ခြံမြေ၊ ကား စည်းစိမ်များကိုတောင်းဆိုမှု ကျမ်းစာမှာအလွန်နည်းပါးပါတယ်။ ဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာ ရွှေငွေ၊ ဥစ္စာပစ္စည်း မဟုတ်ဘူးလို့ .. အချိုဓမ္မဆရာများက အတိအလင်းဟောကြားပါတယ်။ တကယ်တော့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာ ရွှေငွေ၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ဥစ္စာပစ္စည်းများလည်း အနည်းအကျဉ်းပါဝင်ပါတယ်။ တကယ်သေချာတဲ့ ဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာ မမြင်ရတဲ့အရာမျာဖြစ်ပါတယ်။ ဂလာတိ ၅း၂၂ မှာ ဝိညာဉ်အသီး ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းခြင်း၊ တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ Blessing ကို ၁ကော၉း၂၃ မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျမ်းစာမှာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်းများစွာကို တွေ့ရပါတယ်။ တကယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာ မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာများမဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားလှပါတယ်။ ယာဇ်ပရောဟိတ်၊ ပရောဖက်၊ ဘခင်၊ မိခင်၊ ခေါင်းဆောင်များ၊ သားသမီးများ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကောင်းကြီးပေးကြပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဆီကလာတဲ့ ကောင်းကြီးပေးခြင်းဟာ အမြင့်မားဆုံးသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာဟာ ဘုရားပိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အသက်ဝိညာဉ်တောင် ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ငါဖြစ်သည်အတိုင်းဖြစ်သည်..ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘုရားသခင်ပေါ်မှာပဲ အားလုံးတည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တောင်းကြလော့၊ တောင်းလျှင်ရလိမ့်မည်...ဆိုတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်ဟာ မမြင်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုသာ အဓိကထားကြောင်း ထင်ရှားလှပါတယ်။ 06-Sep-2014
Please, kindly suggest...
thank you.., What Gospel say, do not follow money, materialism - people are following prosperity gospel and sadly, final judgement is coming. Important is "I have to escape from Final Judgement, then my loved family and friends will follow". Prigrim's Progress said, I must always see Jesus for "vertical relationship with GOD".
Posted by Witmone at 2:53 PM